Qudbadii Af Axmaariga ahayd ee Cabdi ilay waxaan ka xusaya 6 qodob oo micno badan lahayn. | ogaden24
Qudbadii Af Axmaariga ahayd ee Cabdi ilay waxaan ka xusaya 6 qodob oo micno badan lahayn.
1. Waxuu amaan iyo jacayl badan u muujiyay Abiye. Isaga oo yiri ninkan oo kale lama arag, Afur buu noo sameeyay bishii ramadaan, jacaylka qoysku na baray iyo in la is cafiyo.
2. Waxuu sheegay innuu isbadalka Abiye horseeday Ethiopia uu ku dhaqmayo oo deegaanka soomalida laga hir galin doono. Hadana isbadalkaas socdo oo la siidaayay maxaabiistii oo dhan waxii ONLF u xidhnaa.
3. Waxuu sheegay in ONLF iyo maxaabiistodi siyaasiga lasii wada daayay. Hadana wax yar oo danbiilayaal ah oo dad dilay ay jeelka ku hadhay kuwaasna dhaqanka soomaaliga lagu xalin doono. ONLF waxuu ugu baaqay in ay ka faa idaystaan nabada Abiye ugu baaqay. Dhinaca kale waxuu sheegay innuu cafis waydiisanayo bulshada iyo maxaabiista.
4. Waxuu sheegay in been badan socoto oo la xidhiidha dhinaca maxaabiista iyo jeelasha. Laakiin ay jirto qaladyo badan oo horay u dhacay. Qaladyadaas in wax laga barto oo la saxo waxii qalad soo dhacay. Waxuu danbiga deegaanka oo dhan saaray nin uu ku sheegay Getachew Asefa
5. Getachew Asefa ayaa sabab u ah musuq maasuqa deegaanka soomalida. Waa nin furtay xafiis qarsoon oo aan la aqoonin maanta ka hor. Anigu mudo dheer ayaan ninkan aqaanay. Dhibaato badan ayuu ii gaystay. Falal danbiyeed oo badan ayuu gaystay oo dilal leh. Waa ninka soomalidu ka amar qaadanaysay deegaankayaga. Waa ninka xataa madaxwaynayaal magacabay jeebkiisa ah.
6. Ninkan Getachew Asefa ahaa waa nin laga cabsanayay. Xataa maamulka sare ee EPRDF waa kawarhayeen qaladaadka uu ku hayay soomalida.wayna kasoo horjeedeen waxuu nagu samaynayo. Dacwado ayaan ka gudbiyay cid iga maqashay ma jirin.
Qaladaad badan ayaa dhacay hala xisaabtamo ama hala is cafiyo. Cafiska diyaar baan u ahay. Qofkii aan diyaar u ahayn cafiska oo qaladkiisa inkira waa shaydaan.
Cabdi tolow maxaa ku soo kordhay!